Hairstyle | YUYU BEAUTY - Part 157
You are at:Home»Category: "Hairstyle" (Page 157)
Partyပွဲနဲ့ အခမ်းနားတွေမှာ သူများတွေအားကျရလောက်တဲ့ Hair Style!
မြန်မာဆန်ဆန် မင်္ဂလာပွဲတက်အခမ်းနားနှင့် ဘွဲ့နှင့်သဘင်အခမ်းနားများသို့ သွားရာတွင်သင့်တော်သောHair Style ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်နေ့တွေနဲ့မတူညီတဲ့နေ့။ အရေးကြီးတဲ့နေ့အတွက် ချစ်စရာကောင်းပြီး သူများတွေအားကျလောက်မယ့်…
ဒီနေ့ရဲ့အဓိကဇာတ်ဆောင် It’s Me! အားလုံးနဲ့ ကွဲပြားခြားနားပြီးအဖိုးတန်တဲ့ Hair Style
လှပတင့်တယ်တဲ့ ဆံကေသာကတော့ သေခြာပေါက်Long Hairဖြစ်ပါတယ်။ လှပတင့်တယ်သော ဆံကေသာပိုင်ရှင်များအတွက်Hair Style! ဆံပင်ရှည်သောသူများသာ လုပ်နိုင်တဲ့Hair Style!…
ပန်းကိုအသုံးမပြုချင်သော လူငယ်များအတွက် ပန်းပွင့်ပုံစံparty style! အမှတ်တမဲ့ကြည့်လျှင် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံ။
Partyနဲ့အခမ်းနားများသွားချိန်မှာ သူများတွေနဲ့မတူထူးခြားမယ့် Hair Style! ပန်းပွင့်ပုံစံလေးဖြစ်တာကြောင့် ပန်းမပန်ချင်သူများအတွက်အထူးသင့်တော်လှပါတယ်။ 1. ဆံပင်ကိုအပိုင်း ၃ပိုင်းခွဲလိုက်ပါ။ 2.…
အခမ်းအနားပွဲများအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြန်မာဆံထုံးပုံစံလေးပါ။
မြန်​မာဆန်​ဆန်​အခမ်းနားများအတွက်​ဆံပင်​ပုံစံ​လေးပါ။ ကိုယ်​တိုင်​အလွယ်​တကူလုပ်​လို့ရပါတယ်​။ Lucky Eyes ကအစ်​မ​တွေရဲ့လက်​ရာဖြစ်​ပါတယ်​။ 1. ရှေ့တစ်ခြမ်း _ နောက်တစ်ခြမ်းခွဲစည်းထားပါ။ 2.…
မြန်မာမိန်းကလေးများအလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ Hair Style! မြန်မာလိုအခေါ်ကတော့ ငါးရိုးကျစ်ဆံမြီးပေါ့။
ဂျပန်လိုတော့　(အမိကိုမိ)Amikomiあみこみ　ကဲလိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်! 1. အရင်ဆုံး ဆံပင်များကိုနှစ်ဖက်ခွဲထားလိုက်ပါ။ ညာဖက်ခြမ်းမှ စတင်ကျစ်ပါ့မယ်။ 2. ထို့နောက် ဆံပင်များကို ၃ခုခွဲလိုက်ပါ။…
အခုလူသိများတဲ့waterfallရဲ့ပုံစံအသစ်လေးကိုရှင်းပြပါမယ်။ အခုတစ်ခါတော့တစ်ဝတ်စီပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာ Accessoriesများနဲ့အလှဆင်တဲ့ပုံစံလေးပါ။ အရင်ဆုံးအခြေခံwaterfallကိုURLကနေကြည့်၍မှတ်သားပါ။ >>　အမေရိကားမှာလူကြိုက်များတဲ့ Waterfall ဆံပင်ပုံစံလေးပါ။ အခုချိန်ထိလဲခေတ်စားနေစဲ 1.Waterfallဆံပင်ပုံစံကိုညာဘက်မှစတင်၍လုပ်ပါ။…
အမေရိကားမှာလူကြိုက်များတဲ့ Waterfall ဆံပင်ပုံစံလေးပါ။ အခုချိန်ထိလဲခေတ်စားနေစဲ
အခုအမေရိကားနှင့်Euroမှာခေတ်စားနေတဲ့Waterfallဆံပင်ပုံလေးကို လုပ်တက်ကြသလား? ဒီတခါတော့Waterfallဆံပင်ပုံစံလေးကို ဘယ်သူမဆိုလုပ်ရလွယ်ကူမယ့် ပုံစံလေး…! 1. ဆံပင်ကိုအားလုံးအနောက်ပို့ထားပါ။ 2. နားရွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆံပင်များကိုယူလိုက်ပါ။…
ဒီတစ်ခေါက်တင်ပြမယ့် ပုံစံလေးကိုမှတ်သားရင်း အရင်တစ်ခေါက်က ဆံပင်ပုံစံလေးကိုလဲမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။♡ ခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် လွယ်ကူတဲ့hair styleလေးမို့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲမျှဝေလိုက်ပါနော်။ *ဆံပင်ကိုသုံးပိုင်းခွဲလိုက်ပါ 1.…